Ndingawulawula Njani Umsindo? | Ulutsha Luyabuza
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBulgarian IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiGun IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKiluba IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMaltese IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu
Kutheni kubalulekile oku
Uba nawo kangakanani umsindo?
andifane ndibe nawo
Uba mkhulu kangakanani umsindo wakho?
Ngubani odla ngokukwenza ube nomsindo?
Ukuba ufuna ukuwulawula umsindo wakho, eli nqaku lingakunceda! Kuqala, cinga ngezizathu ezibalulekileyo zokuhlala uzolile xa ucatshukiswa.
Impilo yakho. IMizekeliso 14:30 ithi: “Intliziyo ezolileyo ibubomi kumzimba.” Ngokwahlukileyo, iJournal of Medicine and Life ithi “umsindo ungakwenza ube nesifo sentliziyo.”
Abahlobo bakho. IBhayibhile ithi: “Musa ukuba liqabane lakhe nabani na onomsindo; yaye ungahlali nomntu obhabhama ngumsindo.” (IMizekeliso 22:24) Ngoko ke, ukuba ungumntu ohlala enomsindo, sukothuka xa abantu bengathandi ukuba kunye nawe. Enye intwazana egama linguJasmine ithi: “Ukuba awukwazi ukuwulawula umsindo wakho, uya kulahlekelwa ngabahlobo yaye abanye abazi kukwazi ukukuncenda.”
Indlela owaziwa ngayo. Omnye umfana ona-17 ogama linguEthan uthi: “Xa ugqajukelwa ngumsindo, uhlala usaziwa njengomntu onjalo.” Zibuze, ‘Ndifuna ukwaziwa njengomntu onjani—umntu ozolileyo okanye umntu onomsindo ohlal’ usempulweni?’ IBhayibhile ithi: “Ozeka kade umsindo unokuqonda okuninzi, kodwa ongenamonde uphakamisa ubudenge.”—IMizekeliso 14:29.
Akakho umntu ofuna ukuhlala nomntu ogqajukelwa ngumsindo
Cingisisa ngezi zibhalo zilandelayo kunye noko kuthethwa ngabanye, uze uzibuze le mibuzo ilandelayo.
IMizekeliso 29:22 ithi: “Umntu onomsindo uxhokonxa usukuzwano, yaye nabani na otyekele emsindweni unokunxaxha okuninzi.”
“Ndisakhula, kwakunzima ukuwulawula umsindo wam. Ngabantu bakulotata abanale ngxaki, inoba ke nam bandosulele. Kuba nzima ukulawula indlela esivakalelwa ngayo!”—UKerri
Ngaba ndihlala ndinomsindo? Asikwazi kuthi kungenxa yemigudu yethu le nto sineempawu ezintle size siphinde sijike sityhole abazali bethu ngeempawu ezimbi.
IMizekeliso 15:1 ithi: “Impendulo, xa inobulali, isusa umsindo, kodwa ilizwi elibangela intlungu linyusa umsindo.”
“Umele ukwazi ukuzilawula iimvakalelo zakho. Ukuba uzama ukuba ngumntu ozolileyo, awuzi kukhawuleza ugqajukelwe ngumsindo.”—UDaryl
Into oyenza emva kokucatshukiswa yeyona ibalulekileyo.
IMizekeliso 26:20 ithi: “Apho kungekho nkuni uyacima umlilo.”
“Elona yeza lokuphendula umntu obhabhamayo, kukuthetha ngendlela ezolileyo.”—UJasmine.
Amazwi nezenzo zingatshis’ okomlilo.
IMizekeliso 22:3 ithi: “Onobuqili ubona intlekele azifihle, kodwa abangenamava bayadlula baze bafumane isohlwayo.”
“Ngamany’ amaxesha kuye kunyazeleke ukuba ndikhe ndiyokubethwa ngumoya, ndize ndicinge ngaloo nto yenzekileyo. Emva kwethuba elithile, ndiyakwazi ukujongana nayo ndizolile.”—UGary
Liliphi ixesha ekunokuba kuhle ukuba ukhe uyishiye ingxabano ngaphandle kokwenza ngathi uyambaleka loo mntu uxabana naye?
UYakobi 3:2 uthi: “Sonke siyakhubeka izihlandlo ezininzi.”
“Ewe kona, sifanele sizisole ngeempazamo zethu, kodwa ke kufuneka sifunde kuzo. Kufuneka siphakame sivuthulule size silungise apho sisilela khona.”—UKerri.
Icebiso: Zibekele usukelo. Zixelele ukuba uzohlala uzolile kangangexesha elithile—mhlawumbi inyanga. Kufuneka umane uzihlola ukuba uqhuba njani.
“Ndandidla ngokucinga ukuba abantu abangakhawuleziyo ukuba nomsindo ngamatyutyusi; ngoku ndiyabona ukuba babethobekile—olona phawu lubalulekileyo esinokuba nalo. Ukufunda ukuwulawula umsindo wam akukho lula kodwa kuluncedo!”—UAlyssa
“Ukutsal’ umoya kundinceda ndicinge ngaphambi kokuba ndenze into endiza kuzisola ngayo kamva. Ukuba nomsindo akuncedi nganto, kunoko kuyazonakalisa izinto.”—UErik
Iindlela ezintlanu ezisekelwe eBhayibhileni ezinokukunceda ulawule umsindo.
Ibali lento eyenzeka kuDavide, ukumkani wakwaSirayeli, lingakunceda ukwazi ukulawula umsindo.